Ebube Ebube Ebube n'Ugwu, Epeepe n'Ọkụ Elu, Ebube Nlekọta Ndị Nlekọta na Ndị Nlekọta na China
Nkọwa:Ebube Ebube Ebube,Mpempe akwụkwọ Mpị,Ebube nke kachasị elu,Mbara Igwe Mbara N'elu,,
Home > Ngwaahịa > Ebube Ogologo > Uhie Post elu
Ngwaahịa nke Uhie Post elu , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ebube Ebube Ebube , Mpempe akwụkwọ Mpị suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ebube nke kachasị elu R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
30W Garden Light Fittings Florida Dubai 5000k  Kpọtụrụ ugbu a
Nyocha nyocha ọkụ ọkụ 50W 240V 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
30W Garden Light Post Dochie Bulbs na Polo  Kpọtụrụ ugbu a
Ìhè nke Ogige nwere ihe nrịba mmegharị maka ire 50W  Kpọtụrụ ugbu a
Nchọta ọkụ ọgbụgba ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ osisi 30W  Kpọtụrụ ugbu a
50W Garden Light Post 65000LM 4000K  Kpọtụrụ ugbu a
30W Garden Light Light 39000LM 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
50W Led Garden Lighting Posts 6500LM  Kpọtụrụ ugbu a
Light Bulbs n'èzí Ogwe Ọdụ 30W 39000LM  Kpọtụrụ ugbu a
ETL DLC mere ìhè 30W  Kpọtụrụ ugbu a
duziri ìhè 30W maka igwu mmiri  Kpọtụrụ ugbu a
150w post yard yard ìhè  Kpọtụrụ ugbu a
5000K 277VAC 150W Ọkụ Mpaghara Mpaghara  Kpọtụrụ ugbu a
Ebube n'èzí N'elu Osimiri 150W  Kpọtụrụ ugbu a
Ogologo Uzo Ahuhu Uzo Ogugu 150W  Kpọtụrụ ugbu a
50W 6500lm Mmiri mmiri mmiri  Kpọtụrụ ugbu a
100W mere ìhè dị n'elu maka igwu mmiri  Kpọtụrụ ugbu a
DLC High Quality 100W na-eduzi nkwụsị elu  Kpọtụrụ ugbu a
Daywhite 5000K 100W duziri ìhè mpaghara ebe  Kpọtụrụ ugbu a
Ebube 100W LED Post Top Mpaghara ìhè  Kpọtụrụ ugbu a
IP65 75W Post Top Lamps For Path Garden  Kpọtụrụ ugbu a
Osisi 30w Garden Light Florida polo na-akwado nkwado dabara adaba osisi 3 3/8 inch OD tenon & 3 inch. Na mgbakwunye, nke a Garden Light Dubai na-akwado ntinye ọkụ ọkụ nke AC100-277V dị ugbu a, ma e jiri ya na 100W metal halide light bulbs,...
Ezigbo Ogige Ugbo 50w nkwado na-akwụkwụ poodu kwesiri ekwesi 2 3/8-inch OD tenon & 3 inch. Na mgbakwunye, Ntugharị Ọhịa a na-akwado ntinye ọkụ dị na AC100-277V dị ugbu a, ma e jiri ya na 200W metal halide light bulbs, chekwaa ihe ruru 90% nke...
Nnukwu ọgbụgba ọkụ ọgbụgba ọkụ ọgbụgba ọkụ ọkụ 30w na-etinye nkwado na-akwụ ụgwọ na -eme ka ọ bụrụ ogwe osisi 3 3/8 inch OD tenon & 3 inch. Na mgbakwunye, Ogige Ubi a na .kwụ na-akwado ntinye ọkụ ọkụ nke AC100-277V dị ugbu a, ma e jiri ya na...
Ihe Nnukwu Ihe Nnweta Ugbo 50w nkwado na-akwụkwụ poodu kwesiri ekwesi 2 3/8-inch OD tenon & 3 inch. E wezụga nke a, Ìhè Ọgba A na-ere na-akwado ntinye ọkụ dị na AC100-277V dị ugbu a, ma e jiri ya na 200W metal halide light bulbs, chekwaa ihe...
Ogwe osisi ọgbụgba ọkụ 30w Amazon na- akwụ ụgwọ ntanetị na ntanetị dabara na 3 3/8-inch inch OD tenon & 3 inch osisi. Na mgbakwunye, Ogwe Ubi a Ogige na-akwado ntinye ọkụ ọkụ nke AC100-277V dị ugbu a, ma e jiri ya na 100W metal halide light...
Ulo Oru nke Ugbo 50w nkwado na-akwụkwụ poodu kwesiri ekwesi 2 3/8-inch OD tenon & 3 inch. E wezụga nke a, Ìhè Ahịrị Udiri ala na-akwado ntinye ọkụ dị na AC100-277V dị ugbu a, ma e jiri ya na 200W metal halide light bulbs, chekwaa ihe ruru 90%...
Ogwe osisi ọgbụgba ọkụ n'ọdọ ụlọ nke 30w na-akwụ ụgwọ na-akwado kwekọrọ na 3 3/8-inch inch OD tenon & 3 inch osisi. Na mgbakwunye, nke a Garden Light Atlanta na-akwado ntinye ọkụ ọkụ nke AC100-277V dị ugbu a, ma e jiri ya na 100W metal...
Anyị 50w Dugara Garden Ìhè Amazon nkwado na-akwụkwụ poodu kwesiri ekwesi 2 3/8-inch OD tenon & 3 inch. Na mgbakwunye, ihe ndozi nke Ọgba Atụrụ Led na-akwado ntinye ọkụ dị na AC100-277V dị ugbu a, ma e jiri ya na 200W metal halide light bulbs,...
Ìhè 30w Ibe Gị Maka Ubi n’ime nkwado na-akwụkwụ poodu kwesiri ekwesi 2 3/8-inch OD tenon & 3 inch. E wezụga nke a, Ejiji Egwu Ndị Anwụrụ Anwụ na-akwado ntinye ọkụ ọkụ nke AC100-277V dị ugbu a, ma e jiri ya na 100W metal halide light bulbs,...
ETL DLC mere ìhè 30W 1. 30W DLC biputere ìhè Nchekwa ike, ihe gbasara gburugburu ebe obibi, ọ bụghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. mee ka ìhè ìhè dị 30w Ugbochi, mgbochi mmiri, enweghị ncha, ọ dịghị ihe mgbochi, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike...
duziri ìhè 30W maka igwu mmiri 1. 30W na- eduzi Post n'elu ìhè Ịkụbe ọkụ , nchekwa gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. mee ka oghere ebe kachasị elu Ugbo elu, mgbochi mmiri, enweghị ntighari, enweghị ihe ọkụ, chebe anya gị....
150w post yard yard ìhè 1. 15 0W na- eduzi Post Top ìhè Ịkụkwa ike, na gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- ebute ebe dị elu 150W Ugbochi, mgbochi mmiri, enweghị ncha, ọ dịghị ihe mgbochi, na-echebe anya gị. 3. 150W post ìhè...
5000K 277VAC 150W Ọkụ Mpaghara Mpaghara 1. 15 0W na- eduzi Post Top ìhè Ịkụkwa ike, na gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- ebute ebe dị elu 150W Ugbochi, mgbochi mmiri, enweghị ncha, ọ dịghị ihe mgbochi, na-echebe anya gị....
Ebube n'èzí N'elu Osimiri 150W 1. 15 0W na- eduzi Post Top ìhè Ịkụkwa ike, na gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- ebute ebe dị elu 150W Ugbochi, mgbochi mmiri, enweghị ncha, ọ dịghị ihe mgbochi, na-echebe anya gị....
Ogologo Uzo Ahuhu Uzo Ogugu 150W 1. 15 0W na- eduzi Post Top ìhè Ịkụkwa ike, na gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- ebute ebe dị elu 150W Ugbochi, mgbochi mmiri, enweghị ncha, ọ dịghị ihe mgbochi, na-echebe anya gị. 3. 150W...
50W 6500lm Mmiri mmiri mmiri 1. Mmiri mmiri ọkụ 50W 6500lm Nchekwa ike, ihe gbasara gburugburu ebe obibi, ọ bụghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. Mee ìhè 6500lm Igwu mmiri Ugbochi, mgbochi mmiri, enweghị ncha, ọ dịghị ihe mgbochi, na-echebe anya gị....
100W mere ìhè dị n'elu maka igwu mmiri
100W mere ìhè dị n'elu maka igwu mmiri 1. 10 0W na- eduzi Post Top ìhè Ịkụbe ọkụ , nchekwa gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- eduga ebe dị elu 100W Ugbochi, mgbochi mmiri, enweghị ncha, ọ dịghị ihe mgbochi, na-echebe...
DLC High Quality 100W na-eduzi nkwụsị elu 1. 10 0W na- eduzi Post Top ìhè Ịkụbe ọkụ , nchekwa gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- eduga ebe dị elu 100W Ugbochi, mgbochi mmiri, enweghị ncha, ọ dịghị ihe mgbochi, na-echebe...
Daywhite 5000K 100W duziri ìhè mpaghara ebe 1. 10 0W na- eduzi Post Top ìhè Ịkụbe ọkụ , nchekwa gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- ebute ebe a na-ahụ maka ogwe ọkụ ihu -egwu, mgbochi mmiri, enweghị nchapụ, ọ dịghị ọkụ,...
Ebube 100W LED Post Top Mpaghara ìhè 1. 10 0W na- eduzi Post Top ìhè Ịkụbe ọkụ , nchekwa gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- ebute ebe a na-ahụ maka ogwe ọkụ ihu -egwu, mgbochi mmiri, enweghị nchapụ, ọ dịghị ọkụ, na-echebe...
IP65 75W Post Top Lamps For Path Garden Atụmatụ: 1. duru Post kacha elu ọkụ Ịchekwa ikike, gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- ebute ebe a na-ahụ maka ogwe ọkụ ihu -egwu, mgbochi mmiri, enweghị nchapụ, ọ dịghị ọkụ,...
China Uhie Post elu Ngwa
Uhie Post elu bụ ETL DLC Listed.30W 50W 75W 100 Watt IP65 Post Top bụ Bollard Retrofit ikanam Circular Street Light 5000K 130 lumen per watt (100-300W HID / HPS / MH / CFL Replacement) Ìhè 120 Degree Distribution Area Lighting for Subway Backyard, Mpempe akwụkwọ ntanetịpụtakwa 80% ọzọ ike iji ya tụnyere mmemme ọkụ ọkụ ọdịnala. Ihe ndị a mara mma nke kachasị elu bụ ndị dị mma maka nrụnye ọhụrụ.Ohu ọhụrụ anyị mere ka ọkụ ọkụ na-eme ka ubi gị bụrụ ihe pụrụ iche .Ọ bụ Ebe Wet, Dust and Bug Proof, IP65 Akara maka awa 50,000 na akwụkwọ ikike afọ 5.
Ebube Ebube Ebube Mpempe akwụkwọ Mpị Ebube nke kachasị elu Mbara Igwe Mbara N'elu 50W Ebube Ebube Ebube